Maxkamad Puntland ku taalla oo xukun ki riday rag Shabaab ka tirsanaa | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Maxkamad Puntland ku taalla oo xukun ki riday rag Shabaab ka tirsanaa
Maxkamad Puntland ku taalla oo xukun ki riday rag Shabaab ka tirsanaa
Maxkamadda Ciidamadda Qalabka sida ee Maamulka Puntland ayaa Maanta oo Arbaco ah xukun dil toogasho ah ku riday xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-shabaab.
Xubnahaan oo gaaraya ilaa 5 Rag ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay Maxkamadeyntooda ka socotay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka tirsan Al-shabaab.
Xeer ilaalinta Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sida ee Maamulka Puntland ayaa ku heshay dembi ah 5-ta ruux inay Al-shabaab u qaabilsanaayeen fulinta qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee ka dhacay Gaalkacyo 13-kii sano ee dambeeyay.
Maxkamadda Ciidamada Puntland oo Maanta soo gaba-geeysay dhageysiga kiiska loo heysto eedeysanayaashan ayaa ku riday xukun dil toogasho ah, waxaana sidaas Warbaahinta u sheegay Guddoomiyaga Maxkamadda.
Ugu dambeyn Maxkamadda waxay xorriyadooda u soo celisay lix qof oo kale, kuwaasoo lagu waayay wax danbi ah, kadib markii horey looga shakiyay inay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha Al-shabaab.
Previous articleKoox hubaysan oo sheekh caan ah ku dishay gobolka Mudug